Izinhlobo ezintathu zezibani zokukhanyisa igumbi lakho lokudlela | Bezzia
UMaria vazquez | 09/05/2022 20:00 | Tricks umhlobiso
Awazi ukuthi ukhanyisa kanjani igumbi lakho lokudlela? Kunezinhlobo eziningi zezibani ongazisebenzisa ukuze unikeze ukukhanya okuqondile etafuleni lokudlela futhi ngenxa yalesi sizathu ukwenza isinqumo kungaba nzima kakhulu. Ukwenza kube lula kuwe, kwa-Bezzia sabelana nawe namuhla izinhlobo ezintathu zezibani ongeke uphazame ngazo.
Kunezinhlobo ezintathu zamalambu ophahleni okukhanyisa igumbi lakho lokudlela okunzima ukulilungisa futhi wonke anesici esisodwa: angama-pendants. Ukukhetha okukodwa noma okunye kuzoncika kwisitayela osifunayo ukuhlobisa indawo yomndeni njengegumbi lokudlela.
Kungani ama-pendants? Ngoba sifuna ukusondeza ukukhanya eduze kwetafula ukuze kukhanye. Kuwumqondo ophusile ukucabanga ukuthi ezindlini eziningi bazokwazi ukulenga njengasezithombeni esikubonisa zona. Iningi lethu alinawo amasilingi aphakeme kangaka. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuhlonipha ibanga elithile ukusuka etafuleni ukuya esibani ukuze bangaphazamisi njengoba kubonakala kithi ukuthi kuzokwenzeka ngesithombe sesithathu.
1 isibani esinezingalo
2 Izibani ezilengayo eziphefumulelwe yizimboni
3 Isibani esikhulu semvelo
La izibani zezikhali eziningi Ziyindlela ehlukile yokukhanyisa igumbi lokudlela. Ngokujwayelekile lezi zenziwa i-eksisi emaphakathi lapho izingalo zisuka khona ziye ezinhlangothini ezihlukene ukuze kungabikho ikhona letafula elishiywe lingakhanyisiwe.
Ziyizibani ezinobuntu obuningi futhi zilungele ukuzuza inhlanganisela ekahle ekamelweni lokudlela phakathi kokukhanya okuvamile nokukhanya okugxilile. Labo ngezingalo eziveziwe Bazokuvumela futhi ukuthi ukhanyise enye ifenisha efana nekhabethe.
E-Bezzia sibathola beyisiphakamiso esihle kakhulu sokuhlobisa zonke izinhlobo zamakamelo okudlela. Futhi yilokho izibani ezahlukahlukene kakhulu zalolu hlobo kwenza kube nokwenzeka ukuzivumelanisa nezikhala ezahlukene kakhulu. Uzowathola anezikrini zendwangu, ezilungele ukungeza ukuthinta kwendabuko endlini yokudlela; nge-glass tulips ukuyinikeza isitayela sakudala; noma ibhaluni isitayela ukuze kuzuzwe indawo yamanje neyesimanje.
Izibani ezilengayo eziphefumulelwe yizimboni
Selokhu amalambu alengayo esitayela sezimboni aphinde agqama emhlabeni wokuhlobisa, aqhubekile nokuba yindlela enhle kakhulu yokukhanyisa kokubili isiqhingi sasekhishini kanye netafula legumbi lokudlela. Futhi lezi zikhala akufanele ngempela zibe nesitayela sezimboni kuso.
Nakuba ngenxa yobukhulu bawo kungase kusetshenziswe isibani esisodwa kuphela ukukhanyisa igumbi lokudlela, akuvamile ukutholakala zodwa. I amaqembu ezibani ezimbili noma ezintathu Zivame kakhulu ematafuleni angama-rectangular futhi zinamandla amakhulu okuhlobisa.
Lezi zibani zivame ukwethulwa nazo i-metallic noma i-matte finishes. Imibala yokugcina efana nombala omnyama, ompunga noma wamatshe okwamanje idume kakhulu ekuhlobiseni amakamelo okudlela ama-rustic nesimanje.
Isibani esikhulu semvelo
Izinto zemvelo zihlala zengeza ukufudumala emakhaya ethu. imicu yezitshalo Futhi njengamanje ziwumkhuba wokwakhiwa kwangaphakathi, ngakho kungani ungazifaki ekwakhiweni kwegumbi lokudlela? Singakwenza ngokusebenzisa izihlalo, kodwa futhi ngokubeka isibani esikhulu esiphakathi etafuleni. Awucabangi ukuthi zibukeka zizinhle kakhulu kumatafula amancane ayindilinga noma awunxande?
Lezi zibani azinikezi nje ukukhanya okufudumele kakhulu ekamelweni kodwa futhi zivame ukubonisa ukubonga kumklamo wazo oboshwe. amaphethini amahle odongeni. Ingabe usilingi wakho uphakeme? Alinge ngesibani sohlobo lwensimbi. Uma, ngakolunye uhlangothi, uphahla aluphezulu kakhulu, khetha umklamo oyindilinga futhi oyisicaba.
Lezi ezintathu nje zezinhlobo eziningi zezibani ongazisebenzisa ukukhanyisa igumbi lakho lokudlela. Konke kungalungiswa, ukukhetha umklamo ofanele, ekamelweni lakho lokudlela kodwa nguwe kuphela onganquma ukuthi iyiphi ezokhethwa. Ukuhlola ukuma kwetafula nosayizi walo, kanye nesitayela segumbi, siyaqiniseka ukuthi uzokwazi khetha okulungile. Okokuqala, iyiphi oyithanda kakhulu? Iyiphi ongathanda ukuhlobisa ngayo igumbi lakho lokudlela?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Tricks umhlobiso » Izinhlobo ezintathu zezibani zokukhanyisa igumbi lakho lokudlela